3003 3105 1060 1100 Aluminium Round Plate, Cold Rolled 1000 Series Aluminum Discs Circles - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Ny alimina madio (aluminium 1000-serie, 99.9% + pure) dia manana ny fihenan-damba avo indrindra amin'ny alàlan'ny fitaratra aluminiela, fa noho ny "orange peel effect" izay ahafahan'ny alim-bary madio manazava sy manify toy ny pendriky ny karazan-tsakafony, tsy azo ampiasaina ny alimo madio madio ho toy ny fotodrafitrasa iray (fitaovana maromaro no hanaiky ny fandefasana kapoaka). Noho izany, amin'ny ankapobeny dia ho hitanao ny fanorenana toy izany: ny vy tsy misy ravina, ny alim-bovoka vita amin'ny alimo madio, ny fototry ny alim-borona 3003 na ny 3004, ny aliman-koditra vita amin'ny alimo madio sy ny vy tsy misy rongony. Ny alim-bary 3003 / 3004 dia manana fitantanana ara-pototra ambany kokoa raha oharina amin'ny alimina madio, nefa koa misoroka ny vokatra mainty.
Raha toa ianao ka manontany tena hoe nahoana cookware mpanamboatra mampiasa 3003 / 3004 aluminium fa tsy hafa aluminium alloys izay manana kely kokoa mafana conductivity, dia satria 3003 / 3004 aluminium dia lafo, dia mora namorona (izany hoe, atao ho samy hafa endrika sy habe cookware) , dia manana faharetana / tanjaka tsara ho an'ny fikarakarana ny lakozia, ary manjavozavo kokoa noho ny alimo hafa. Ny zava-dehibe farany dia zava-dehibe tokoa, satria ny fitaovana ara-barotra ara-barotra sy ny trano fonenana dia mifatotra hatrany anaty boaty / lavenona / koveta ary havaozina amin'ny rano, sira, ary sira ao anatin'izy ireo amin'ny karazam-bolana.
Amin'ny maha-mpamatsy mainty hoditra manodidina ny alim-borona, alim-borona, alim-borona, vita amin'ny alimine madio ary ampiasaina amin'ny fitaovana fikarakarana sy ny teknika, toy ny mahandro sakafo, tanjona mazava, kojakoja, mofomamy, vilany, ketaly, hazavana, sns ... Azo atao ny mamolavola ny sarin-doko lalina sy ny kalitao henjana. Ny Circumference Aluminium dia ny RoHS ary ny fanarahan-dalàna REACH ary ampiasaina amin'ny famokarana voaaro tsara. Ny faribolantsika dia fitaovana tena tsara ho an'ny famokarana fitaovam-pihinanana, fitaovana, vilany, kitay sy kesika.
Ny famenoana ny alim-borona manodidina, alim-borona, alim-borona, ravin-damosina aluminium, alim-borona, alim-bary vita amin'ny alim-bary dia azo alaina amin'ny standard-ny fanondranana, mandrakotra papier mainty sy sarimihetsika plastika. Farany dia mifototra amin'ny hazo palette hazo / hazo ny alimo Aluminium.
Fampiharana ravina aluminium boribory, alim-borona, alim-borona.
Product Aluminium Circle
firaka 1050 1060 1100 1200 3003
tezitra O, H12, H14, H18 ary H24 ...
savaivony 50mm-1600mm, matetika 200mm mankany 700mm
Lead Time Ao anatin'ny 30-45 andro aorian'ny fandraisana azy
fonosana Standard fanondranana hazo palettes na mifototra amin'ny fangatahana mpanjifa
Fitaovana Mampiasa ny teknolojia avo indrindra mampiasa ny Aluminium Coil.
surface: Mibaribary tsara tarehy, malalaka amin'ny tsy fahampian-tsakafo toy ny harafesina fotsy, paty solika, fahavoazana tampoka.
1050 / 1100 / 3003 Low Price Aluminum Disk Amin'ny Sale